Talo & Tricks Sidee inay dayactir Lugood Library
> Resource > Lugood > Talooyin iyo tabaha in dayactir Lugood Library
"Maktabadda My Lugood waxaa burburay. Ka dib markii aan furo oo kaliya si aad u ogaato in dhamaan playlists tageen. Suroobi karaa waddo inaan ku saxno? All gabayadayda, dhab ahaantii ka badan 5000 oo ku jira in. Anigu iyaga ma waayi kartaa tan iyo kuwa badan oo iyaga ka mid ah waxaa lagu dooxay ka CD inaan mar dambe kuma ay leeyihiin. Fadlan, fadlan caawiyo. "
Iyadoo ku riyaaqayaa adeega fiican Lugood bixisaa, sida user ee kor ku xusan, mararka qaarkood, qaar ka mid ah sababaha aan la garanayn, Lugood laga yaabaa musuqmaasuq ama dhintay. Oo Xaaladaha qaarkood, a pop-up ka muuqan kara, kuu sheegaysa faylka "Lugood Library.itl" aan la akhrisan kartaa. Si kastaba, markii dhibaato, halkii ay ka abuuraya ah Lugood Library cusub, tahay mid aad u badan tahay in ay doortaan waxa qamaar aad. Ka dib oo dhan, waxaa jira daraasiin ama boqolaal heeso iyo playlists ee Lugood Library kharribeen. Ok, haddii ay sidaas tahay, info ee soo socda waxaa laga yaabaa in gargaar weyn.
Hagaajin Waxyeello / musuqmaasuqa Lugood Library
Haddii aad heshay digniin ah "Lugood Library.itl aan la akhriyi kartaa" ka Lugood Library ama aad la casriyeeyay Lugood Library si joogto ah, aad u hagaajin kartaa Lugood Library waxyeeleeyeen musuqmaasuq "Lugood Library.itl" faylka baddalay ah ka weyn hal. Marka hore, si uu u xaliyo Lugood Library, waa in aad xirto Lugood, in la hubiyo waxa aan la socda wax ka badan. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad dhaawici Lugood Library wayn. itl marka aad u hagaajin. Raadi Lugood Library.itl on your computer oo ay magaceeda u bedesho sida waxa aad jeceshahay, waxaad ku tidhaahdaa "Lugood Library damaged.itl". Laga soo bilaabo folder sida "Previous Lugood Maktabadaha" magacaabay si aad u hesho dhawaan Lugood Library.itl. By default, file wuxuu la iman doonaa taariikhda marka aad casriyaynta Lugood Library. Waxaa nuqul meesha "Lugood Library damaged.itl" waa magaca oo sida Lugood Library.itl. Taas ka dib, waxaad u abuurtaan karaa Lugood si aad u aragto haddii aad go'an Lugood Library ama aan. Guud ahaan, tani waa hab degdeg ah si uu u xaliyo Lugood Library.
Halkan waxaa ku qoran liis ee goobta maktabadda Lugood faylasha:
Mac waddaa in Mac OS X
/ Users / username / Music / Lugood / Lugood Library.itl
PC waddaa in Windows XP
\_ Documents iyo Settings \_ username \_ Documents My \_ My Music \_ Lugood \_ Lugood Library.itl
PC waddaa in Windows Vista, Windows 7, iyo Windows 8
\_ Users \_ Music \_ username \_ Lugood \_ Lugood Library.itl
U dayactir Lugood Library ka qalabka macruufka (iPhone / iPod / iPad)
Habka kor lagu soo sheegay kaa caawin kara inaad ka dhalato waxyeelo Lugood Library. Taasu way wanaagsan tahay, haddii aadan badiyay file kasta. Dadka qaarkood ayaa sidoo kale la kulmi xaqiiqada dhabta ah in ay qaar ka mid ah laga badiyay songs in Lugood markii Lugood burburay. Haddii songs, kuwaas oo la iibsan karo ka Lugood, ay si sahal ah baxey karo. Si kastaba ha ahaatee, haddii songs waxaa lagu dooxay ka CD in aanad ka heli kartaa ama wax ka badan oo ka amaahan, waxa ka nixi waa. Marka soo food saartay xaalad ah, haddii songs, kuwaas oo ku jira qalab macruufka, sida iPod, iPhone, iPad ama, waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare in ay si toos ah u gudbiyaan songs, kuwaas oo si Lugood Library on your computer si ay u xaliyaan dhibaatada. TunesGo waa jiheeye Lugood ah si ay u caawiyaan macruufka dadka isticmaala si ay u gudbiyaan songs, videos, iyo xitaa sawirada dib u computer. Wixii faahfaahsan info, fadlan akhri sida loo ka wareejiyo music iPod , iPhone , iPad in Lugood Library.
Download Wondershare maxkamad version TunesGo in ay isku day ah!